Hojiin diizaayinii fi fandii bu’uuraalee misoomaa baatii 3tti akka xumuramu kaabineen Eertiraa kallattii kaa’e – Fana Broadcasting Corporate
Hojiin diizaayinii fi fandii bu’uuraalee misoomaa baatii 3tti akka xumuramu kaabineen Eertiraa kallattii kaa’e
Finfinnee,Fulbaana 19,2011(FBC)- Hojiin diizaayinii fi fandii buufata doonii babal’isuu, bu’uura daandii, anniisaa fi indaastiriyaalaa baatii 3 keessatti akka xumuramu kaabineen mootummaa Eertiraa kallattii kaa’e.
Kaabineen ministiroota Eertiraa waltajjii kaleessa taa’aniin haala qabatamaa naannoo amma jiru waliin tarkaanfachuun barbaachisaa ta’uu eeraniiru.
Ministirri Infoormeeshinii Eertiraa Yemaanah G/masqal haaromuu hariiroo Ityoophiyaa fi Eertiraa, akkasumas carraa gaarii naannichaatti uumameen fayyadamtummaa waliinii mirkaneessudhaaf waliin hojjechuun barbaachisaa akka ta’e kaabinichi waltajjii isaatin mirkaneessera jedhaniiru.
Kaabineen ministirootaa waltajjichaan walabummaa walii kabajuu, fayyadamtummaa waliinii mirkaneessuu, dhimmoota walitti dhufeenya booressan dhaabuu, haala gaarii naannoo uumuu fi gama hundaan hidhata uumun barbaachisaa ta’uu kaasaniiru.
Fayyadamtummaa waliinii mirkaneessudhaafis haaromsi buufataa, suphaa fi hojiin babal’isuu daandii, anniisaa fi qophiin hojii indaastirii akka hojjetamu kallattii kaa’era.
Hojiin diizaayinii fi fandiis baatii 3 keessatti kan xumuramu ta’uu iseera.
Seermaleessummaa lafarratti raawwatamu mootummaan naannoo Oromiyaa callisee hin…
Kooriyaa Kaabaa hanq’inni midhaan nyaataa muudate
Paartileen siyaasaa yaa’ii waliigalaa fi mana maree hundeessuurratti…
Hojiin seera kabachiisuu cimeet itti fufa -aadde Habiibaa Siraach
Puutiin meeshaleen waraanaa haaraan biyya isaaniin…
Mootiin Saawd Arabiyaa dawwannaa guyyaa lamaaf gara…
Fooramiin magaalotaa xumurame
Daandiin Qilleensaa Ityoophiyaa balalii dubartootan…